Choputa nnukwu abu nke Abu Simbel na Egypt | Akụkọ Njem
Gaa Abu Simbel na Egypt
Susana Garcia | | Afrika, Egypt
La gaa na Abu Simbel dị mgbagwoju anya na ndịda Egypt Ọ bụ njem mmụta bụ isi ma ọ bụrụ na anyị gaa ezumike na mba a. Ọ bụ ihe ncheta nke Ramses II nyere iwu ka ewu ya na nke ahụ nwere ọnọdụ nchekwa dị ukwuu. N'ịbụ ndị nọ n'ebe zoro ezo, a na-eme ọpụpụ iji hụ ya naanị.
Si ị ga-aga Ijipt ị nwere ike ịchọ ịmatakwu ihe nkọwa nke ụlọ arụsị ochie ndị a. Enwere ụfọdụ ịmata ihe na-atọ ụtọ. Na mgbakwunye, anyị ga-agwa gị otu esi aga ebe ahụ yana otu njegharị a na-eme n'ụlọ nsọ a na-adịkarị, ebe dị mkpa na mmadụ niile kwesịrị ịhụ.
1 Akụkọ banyere Abu Simbel
2 Otu esi aga Abu Simbel
3 Ihe ị ga-ahụ na Abu Simbel
4 Curiosities nke ụlọ nsọ
Akụkọ banyere Abu Simbel
Temlọ arụsị ndị a mgbe ochie bụ e gwupụtara ozugbo na nkume ahụ na narị afọ nke XNUMX BC. nke C, n'oge ọchịchị Ramses nke Abụọ. Emere ihe ncheta a nye nwunye nke fero a, Nefertari, iji gosi ike ya nye ndị Nubian. A raara nnukwu ụlọ nsọ ahụ nye ofufe nke chi dị iche iche, nke Ramses n'onwe ya, ebe ọ bụ na ndị Fero lere onwe ha anya dị ka chi, nke Amun, Ra na Ptah. Na-esote chi atọ ndị a n'onwe ya na-anọchi anya Ramses. Ewubere ụyọkọ a iji cheta otu ọgụ nke Kedesh megide ndị Het, bụ nke ọ na-etu ọnụ na ọ meriri agha ahụ. Ọ bụ ihe ijuanya na n’obodo ha ndị Het na-etu ọnụ n’otu ụlọ nsọ ha. Ihe si na ya pụta bụ nkwekọrịta udo n'etiti ha abụọ. Iwu nke temple a di itunanya malitere na 1284 BC. C. ma kwụsị afọ 20 mgbe e mesịrị.
Este temple bụ hypogeum, a na-egwupụta templelọ nsọ a na-ewu ewu na nkume ma ọ bụ n'okpuru ala. Ọ bụkwa otu n’ime isii dị na mpaghara Nubian. Dị ka ụlọ nsọ na ihe owuwu ọ bụla, o nwekwara ebumnuche ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ebe ọ gbalịrị ịmasị ndị Nubia ma mee ka ha kwenye na ịdị mkpa nke okpukperechi ndị Ijipt.
Ka oge na-aga, echefuru ihe ncheta ahụ, ájá wee jiri nwayọọ nwayọọ kpuchie ihe oyiyi ahụ. E chefuru ya kpam kpam ruo narị afọ nke XNUMX, mgbe Switzerland Johann Ludwig Burckhardt bụ onye chọtara ya. Ugbua na narị afọ nke iri abụọ ọrụ siri ike malitere ịchekwa ihe ncheta ndị dị na mpaghara a na nke nwere ihe ize ndụ nke ịla n'iyi n'okpuru mmiri n'ihi iwu nke mmiri Aswan. A kwaturu ụlọ arụsị ndị a na blọk ndị a na-ebuga n'otu n'otu iji gbanwee ọnọdụ mbụ ha, mita 200 n'ihu site na osimiri ahụ na ihe dị ka mita 65 dị elu. Ihe a bụ ihe ncheta anyị ma taa, n’abụghị na ọ nọ na mbụ. Ọ bụ nnukwu ọrụ injinia nke wetara ndị ọkachamara si n'akụkụ ụwa niile na-arụ ọrụ n'okpuru UNESCO.
Otu esi aga Abu Simbel
The monumental ebe Abu Simbel emi odude ke edem usụk Egypt, ke ebe ọdịda anyanwụ nke Ọdọ Mmiri Nasser, Isi kilomita 230 site na obodo Aswan. Mgbe anyị na-eme njem gaa Egypt anyị nwere ike ịhụ na e nwere ọtụtụ ụgbọ mmiri na-aga obodo Aswan, na-agafe mmiri mmiri ahụ. Crugbọ mmiri ndị a bụ ụzọ kachasịsị esi aga Abu Simbel. Ọ na-apụ n'oge site na Aswan ruo n'oge ọ naghị ekpo oke ọkụ. A na-eme njem ụgbọ ala. N’ọtụtụ oge, a na-eme njem ahụ ma laruo abalị n’ogige ndị njem na-eru nso ebe a.
Ihe ị ga-ahụ na Abu Simbel
N'ime nnukwu ihe owuwu a, anyị nwere ụlọ arụsị abụọ dị iche iche, nke a raara nye chi dị iche iche a na-efe ofufe n'oge ahụ yana Ramses nke Abụọ, lekwara anya dị ka chi. A maara nke a dị ka Nnukwu Templelọ Nsọ ma nwee facade dị elu dị mita iri atọ na atọ site na mita 38 n’obosara. Ihe a kpụrụ akpụ nọkwasịrị n'ocheeze. N’akụkụ ihe oyiyi ndị a bụ ihe osise ndị ọzọ na-anọchite anya Nefertari, nwunye Fero, nne eze ma ọ bụ ụmụ ya. N'ime ị nwere ike ịhụ ụlọ nke ogo dị ala, ruo mgbe ị ruru nke ikpeazụ, nke bụ ebe nsọ.
N’akụkụ nnukwu ụlọ nsọ ahụ bụ Minor Temple raara nye Nefertari, Nwunye Fero kacha hụ n'anya. Ihu ihu nwere ihe oyiyi isii, anọ nke Ramses na abụọ nke Nefertari. Ihe dị egwu banyere ihe oyiyi ndị a bụ na ha dị otu, ihe na-adịghị ahụkebe, ebe ọ bụ na nwunye na-anọchi anya obere. Nke a gosipụtara oke mkpa nwanyị a nwere maka Ramses nke Abụọ. Nke a bụkwa ụlọ nsọ nke abụọ nke Fero raara nye nwunye ya. Nke mbụ raara nye Akhenaten na Nefertiti.
Curiosities nke ụlọ nsọ
Ejiri ebe puru iche wue Nnukwu ulo uku Chineke. Anyanwụ dị ezigbo mkpa nye ndị Fero. Ya mere ugboro abụọ n'afọ a anyanwụ na-abanye n'ime ụlọ ahụ na-enwu ihe oyiyi nke Ramses, Ra na Amun. Nke a na - eme na Febrụwarị 21 na Ọktọba 19, dabara ụbọchị ọmụmụ na ịchị eze nke fero. Chi Ptah, na-anọgide na ndò mgbe niile, ebe ọ bụ chi nwere njikọ na ifo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Afrika » Egypt » Gaa Abu Simbel na Egypt
Uru nke mkpuchi mkpuchi iji gaa na Ista